नियोजित कुप्रचारको शिकार बन्यो उत्कृष्ट “पुरानो डुंगा” – हाङयुग अज्ञात | WWW.HATTERI.COM
← हङकङ ल्याइन लागेको सुकुटीमा चरेश…
सम्बोधन बिनाको त्यो यात्रा – समर गुरुङ →
चलचित्र बनाउनु भनेको “कथा भन्नू” हो । प्राचीन मेसोपोटामियाको सुमेरियन सभ्यतामा राजा गिलगमेश र सिंहको द्वन्द्व-युद्धलाई चित्रद्वारा भित्तामा कोरिएको थियो । ती चित्रहरूले राजा गिलगमेशको बहादुरीको कथा भन्छन् । आजको आधुनिक चलचित्रको विकास गिलगमेशका ती चित्रहरूबाट भएको मानिन्छ । कथ्यशैली, संरचना, प्रविधि र विषयवस्तु मात्रै फरक हुँदै आएको हो ।
नेपाली चलचित्र बन्न थालेको लामो भएको छैन । हिजो “बि” या “सि” ग्रेडको हिन्दी चलचित्रहरू सोझै कपी गर्ने जमाना थियो । अहिले मौलिक नेपाली चलचित्र बनाउनेतर्फ नेपाली चलचित्र उद्योग लागिपरेको देखिन्छ । रामबाबु गुरुङद्वारा निर्देशित “पुरानो डुङ्गा” मौलिक नेपाली चलचित्र बनाउने यौटा सुन्दर प्रयत्न हो जो हङकङमा हेर्ने अवसर प्राप्त भयो ।
“पुरानो डुङ्गा”को हेरे पश्चात् मलाई लाग्यो नेपालमा केही समीक्षकहरूले “झुर फिल्म” भनेर गरेको आलोचना गलत रहेछ, पूर्वाग्रही रहेछ । चलचित्र विभिन्न कोणबाट एकदमै उत्कृष्ट छ । कबड्डी जस्तो मुद्दाविहीन चलचित्र बनाएर पैसा र दर्शक त कमाए रामबाबुले तर चलचित्र निर्देशकका रूपमा तेत्ती गहन थिएनन् कबड्डीहरू । पुरानो डुङ्गा हेरिसकेपछि मलाई लाग्यो अब रामबाबु छिप्पिएछ्न् । चलचित्र निर्माण यौटा कला हो, पुरानो डुङ्गा तेसैको प्रमाण ।
कास्टिङमा बेगनास ताल देखाउँदै ल्याएर “पुरानो डुङ्गा”को पेन्टिङमा पुगेर चलचित्र सुरु गर्नु निर्देशकले दर्शकलाई के भन्न खोजेका हुन् भने चलचित्र पेन्टिङ जस्तो छ । वास्तवमा चलचित्र यौटा सुन्दर पेन्टिङजस्तो नै बनेको छ । चलचित्रमा कथा भाषाले मात्रै बोल्दैन, प्रतीक र बिम्बहरूले पनि कथा बोल्छन् । पुरानो डुङ्गामा रामबाबुले त्यस्ता तकनिकहरू प्रयोग गरेका छन् जसले चलचित्रलाई सुन्दर बनाएको छ । जस्तो कि उनले माझी भक्तेको आँगनमा सानो पोखरी बनाएर काठको सानो खेलौना डुङ्गा बेलाबेला देखाउँछ्न् । भक्तेको छोरा पनि भविष्यको माझी नै हुनेछ भन्ने बिम्ब हो त्यो । भक्तेको छोरालाई खाना खुवाएको मात्रै देखाइन्छ । त्यो दृश्य दर्शक हँसाउनु राखिएको होइन, तर पेटको लागि भुजेल परिवार संघर्ष गरिरहेछ भन्ने बिम्ब हो ।
तेस्तै दिउँसो घरभित्र कुपी बत्ती बालेको देखाइन्छ । दिउँसो लालटिन बोकेर जुलुसमा दगुर्ने समीक्षकहरूले यो बिम्ब किन बुझेनन् ? गरिब भुजेल परिवारमा शिक्षाको उज्यालो छैन । छोरालाई बोल्न र पढ्न सिकाइएको छैन । मात्रै भात खुवाइएको छ । भक्तेको पुरानो डुङ्गा त यौटा प्रतीक मात्रै हो । निर्देशकले त नेपाली समाज नै पुरानो डुङ्गा जस्तो छ भनेर देखाउन खोजेका छन् ।
हलीले पण्डितको छोरी(प्रीयङ्का कार्की) माग्न जान्छन्, कथित उच्चजात पण्डितले दिदैंन । हलीले पण्डितको छोरी भगाएर बिहे गर्छ । तेसैकारण हलीलाई तीन वर्ष जेलमा थुनिन्छ । सोझो हली जेलबाट निस्केपछि आफ्नो पत्नी खोज्दै हिँड्छ्न् । हलिको भूमिका शक्तिशाली छ । हलिलाई सबै घर उस्तै लाग्छ । यसमा दर्शनशास्त्र छ । सबै घर उस्तै छ तर जातपातको रूपमा विभेद किन भन्ने घुमाउरो प्रश्न हो यो । जेलबाट निस्केपछि कसैले उसलाई काँबाट आएको भनेर सोध्दा हली भन्छ- अरबबाट । जेल र अरबको जिन्दगी उस्तै हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो संवादमा । आफूलाई तीनवर्ष जेल हाल्ने पण्डितसँग कुनै बदलाको भाव राख्दैन हली । यो मीठो संदेशलाई स्वीकार्नै पर्छ । हाम्रो सोच पुरानो डुङ्गा जस्तै दुलो परेको छ । यदी बेलैमा नयाँ ढङ्गले सोचेनौं भने नेपाली समाज डुब्छ ।
सबै घटना र पात्रहरू गाँसिएका छन् । अनावश्यक तन्काइएको छैन । कथा नयाँ किसिमले भनिएको छ । भक्तेले नयाँ डुङ्गा किन्नु किन ढिलो गर्‍यो भन्ने किसिमका हास्यास्पद आलोचना पनि गरेको पाइयो । मलाई लाग्छ भक्ते छिटो भएको भए उसले बाउबाजेको डुङ्गा चलाएर किन घाट रुँगेर बस्थ्यो ? हवाइजहाज उडाइहाल्थ्यो नि । क्लाइमेक्समा सबै पात्रहरू एकै ठाउँमा भेला भएर दर्शकलाई उपदेश दिने र फिलिम सकाउने शैली पुरानो हो । यस्तो अपेक्षा पनि गरेको पाएँ केही समीक्षकबाट । पुरानो डुङ्गालाई इरिटेसन गर्ने किसिमका समीक्षाहरू आफै निस्तेज हुँदै जानेछन् किनभने हङकङको युनलोङ थिएटरमा दर्शकले तेत्तिकै ताली बजाएका होइनन् ।
बतासेले प्रेम गर्ने चन्दु(प्रीयङ्का कार्की) त खासमा हलीको पत्नी रैछिन् । जीवनलाई डुङ्गासँग दाँज्ने हो भने चन्दुको जीवन पनि पुरानो डुङ्गा झैं महसुस हुन्छ । हलीलाई अस्पताल पुर्‍याउनु नै हलीसँग चन्दुको पुनर्मिलन हुन्छ । उनीहरू आफ्नो प्रेमको पुरानो डुङ्गामा फेरि सवार हुन्छन् । यो कुरो कलात्मक तरिकाले देखाउन सफल भएका छन् निर्देशक । दर्शकलाई सोच्ने स्पेस दिएर निर्देशकले पुरानो डुङ्गालाई काव्यात्मक बनाएका छन् । पटकथा सुन्दर छ । क्राफ्ट महाभारतको जस्तो छ अर्थात् जसरी महाभारतमा मुख्य कथालाई सपोर्ट गर्ने उपकथाहरू छन् तेस्तै पुरानो डुङ्गामा पनि मुख्य कथासँग सपोर्ट गर्ने उपकथाहरू छन् । मलाई यो प्रयोग अत्यन्तै उत्कृष्ट लाग्यो ।
अभिनय सबैले आआफ्नो ठाउँबाट उत्कृष्ट गरेका छन् । मलाई मन परेको पात्र चाहिँ बुद्धि तामाङ अर्थात् हली नै हो । किनभने नेपाली समाजमा भएको जातभातको पुरानो डुङ्गाबाट चन्दुलाई निकालेर नयाँ संसार बसाउने जो उनले आँट गरेका छन् । यौटा शालीन विद्रोह गरेका छन् हली र चन्दुले । चलचित्रले मनोरञ्जन मात्रै होइन, परिवर्तनको आग्रह पनि गर्न सक्नुपर्छ । मलाई पुरानो डुङ्गाको यही कुराले छोयो । वास्तवमा विभिन्न प्रकारका विभेदहरूले नेपाल नै पुरानो डुङ्गा जस्तो भएको छ ।
पुरानो डुङ्गाको कथ्यशैलीमा नयाँपन जो छ त्यो तारिफ योग्य छ । हँसाउँदै, रुँवाउँदै नेपाली समाजको गम्भीर मुद्दालाई पुरानो डुङ्गाले अगाडि सारेको छ । सायद तेसैले यो चलचित्र यौटा पुस्तक जस्तो बनेको हो । जतिपटक हेर्नुस् यो चलचित्रमा निर्देशकले प्रयोग गरेका कथ्यशैली उजागर हुँदै जानेछ । झन् रोचक हुँदै जानेछ । बाहिर बजारमा नियोजित रूपमा जुन कुप्रचार गरियो त्योभन्दा सयौं गुणा राम्रो बनेको छ पुरानो डुङ्गा । बधाई छ पुरानो डुङ्गा युनिटलाई । यस्तै चलचित्र बनोस् जसले सिङ्गो नेपाली चलचित्रको स्तर उकास्ने निश्चित छ
पुरानो डुङ्गाको उदघाटन गर्दै दयाहाङले भने – “रामबाबु गुरुङ र मेरो सम्बन्ध अनागरिक फिलिम बनाउँदादेखिको हो । अहिले हामी पुरानो डुङ्गासम्म आइपुगेका छौं ।” उनलेे यसो भन्दा नै सङ्केत पाएँ कि पुरानो डुङ्गा कबड्डी जस्तो मनोरञ्जनको लागि मात्रै बनाइएको होइन, यो गम्भीर चलचित्र हो । चुट्किलाले चलचित्रको विकास हुन्थ्यो भने प्रकाश थापाले कन्यादान किन बनाउँथे ? नवीन सुब्बाले नुमाफूङ किन बनाउँथे ? हगि !
This entry was posted in Article, Arts & Entertainment, Featured. Bookmark the permalink.
3 Responses to नियोजित कुप्रचारको शिकार बन्यो उत्कृष्ट “पुरानो डुंगा” – हाङयुग अज्ञात
Malai ta ramro lageko thiyo. Tara k bhayera dherai chalena chakka pareko thiye… sathi haru herna jada movie change bhaisakeko thiyo. Yei title le bhane jastai bhayekai hotta.? Malai dai ra bhauju character ko acting dherai ramro lageko thiyo. Yo euta ramro movie ho.. pakkai hernu hola. Katha ramro chha.. acting bisista chha.
‘Purano Dunga’ is the best Nepali movie I have ever watched. It reminded me the movies made by Shyam Benegal and Govinda Nihalini in India. The characters of Bhakte, his wife and the chubby baby are perfect.Story very touchy. Shoots of the location wonderful. Perfectly reflects the true life ofapoor majhi family. Hats off to Rambabu. Keep it up.
अनि त्यो लास्ट्को सिन मा नेपाली पुलिसको काम छैन भन्न खोजेको हो?की के हो?नत्र मान्छे डुबेको देखी देखी पुलिसले वास्ता नगरेको कि निर्देसक्ले?